Fire TV သည် Apple TV မှမီဒီယာဖွင့်စက်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည် ငါက Mac ကပါ
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple က TV ကို, iOS ကို, NOTICIAS
Apple TV FireCore jailbreak တီထွင်သူသည်ယနေ့အချိန်၌ထင်မြင်ချက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည် infuseကြောင်းအတည်ပြုပြီ သင်၏ကစားသမားသည်မြန်။ အားကောင်း။ စွယ်စုံဖြစ်သည် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက် မသွားအောင် Apple TV ၏စတုတ္ထမျိုးဆက်ကိုလာမည် beta ကိုစမ်းသပ်ရန်လက်ခံသူများသည်ဤရက်များအတွင်းအီးမေးလ်ဖိတ်ကြားမှုများကိုခံယူသင့်သည်။ FireCore သည် Infuse beta တွင်ရရှိသောစိတ်ဝင်စားမှုများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည် "အမှန်တကယ်အံ့သြစရာ"။ Infuse Apple TV edition သည်လက်ရှိ iOS app ကိုမကြာမီ update ပြုလုပ်ရန်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာလှပတဲ့တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်တွေ့မြင်လာရပြီး၊ Apple TV အတွက် Infuse4ပုံစံနဲ့လာနေပြီလို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Apple TV အတွက် Infuse4သည်လက်ရှိသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်အခမဲ့ update ဖြစ်လိမ့်မည် Infuse Pro ကို.
မီးသတ် ၎င်းတို့သည် screenshots များကိုမျှဝေခြင်းမရှိသေးသော်လည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းမရှိသေးသော်လည်းအချို့သတင်းရပ်ကွက်များကအဆိုပါ app သည် subtitles ကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံမှုဖြင့် iOS format အတွက်နိုင်ငံခြားမီဒီယာအမျိုးမျိုးကို decode လုပ်ရန် A8 ချစ်ပ်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချသည်ဟုဆိုသည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုဖန်တီးသောအဖွဲ့သည် FireCore တစ်ခုတည်းဖြစ်သည် aTV flash အနက်ရောင် အဲ့တာက Apple TV မော်ဒယ်ပိုင်ရှင်တွေကိုသူတို့ပစ္စည်းကိုလုပ်တဲ့အပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ခွင့်ပေးတယ် homecinema ၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးနှင့်အတူမာလ်တီမီဒီယာစင်တာ.
လက်ရှိတွင် 'Infuse Pro' ရှိသူများသာအက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို (နှင့်အားလုံးမဟုတ်ပါ) အခမဲ့ beta update ကိုပေးပြီးချဲ့ထားသောစာရင်းကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များများစွာပါရှိသည်။ ထောက်ပံ့ဗီဒီယိုပုံစံများအပါအဝင် Dolby Digital Plus (AC3/E-AC3), DTS y အသံထွက်ပါသည့် DTS-HD, AirPlay မှတဆင့် streaming y Google Cast ကိုကိရိယာသော့ခတ်ထားသည့်တိုင်နောက်ခံဗွီဒီယိုများကိုဖွင့်နိုင်စွမ်းအပါအ ၀ င်။ ဒါက Apple TV4အတွက် jailbreak အတွက်အစပဲလို့မျှော်လင့်ပါတယ်၎င်းသည် Apple TV3 အတွက်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple က TV ကို » သင်၏ TV မီဒီယာပလေယာအား Infuse ပြုလုပ်ရန် FireCore ကအတည်ပြုသည်